အွန်လိုင်းလေ့လာသင်တန်းအမှတ်စဥ် Udemy - အွန်လိုင်းသင်တန်းများ | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ပညာရေး Apps ကပ » Udemy - အွန်လိုင်းသင်တန်းများ
Udemy - အွန်လိုင်းသင်တန်းများ APK ကို
Udemy ကျွမ်းကျင်သူသင်တန်းပို့ချခြင်းဖြင့်ဆုံးမသွန်သင် 80,000 + ဗွီဒီယိုကိုသင်တန်းများ featuring အနေနဲ့အွန်လိုင်းသင်ယူမှုပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇိုင်းဆွဲ, အရေးအသားနှင့်ယောဂနဲ့တူပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖှံ့ဖွိုးတိုးအတန်းမှ Python ကို, နဲ့ Java နဲ့တူဘာသာစကားများ programming မှတစုံတခုအတွက်သင်တန်းများယူပါ။ အသစ်ကျွမ်းကျင်မှုကျွမ်းကျင်သူတို့၏အလုပ်အကိုင်များတိုးတက်နှင့် Udemy.LEARN ဘာမှပေါ်သစ်ကိုဝါသနာရှာဖွေစူးစမ်းသူထက်ပိုမို 24 သန်းကျောင်းသားများကို join: 2,000 ကျော်အကြောင်းအရာများအတွက်သင်တန်းများရှာဖွေရန် - စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဖို့ coding များနှင့်အချက်အလက်သိပ္ပံကနေ Photoshop ကို, ယောဂ, နှင့်ပိုပြီး။ နယူးသင်တန်းများ, စက်သင်ယူမှု, အတုထောက်လှမ်းရေးနှင့် blockchain တူသောဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်းအကြောင်းအရာများပေါ်အဆက်မပြတ်လန်းဆန်းဖြစ်ကြသည်။
မတတ်နိုင်လေ့လာရန်: Udemy သင့်ရဲ့ဘတ်ဂျက်အတွင်းအခမဲ့နှင့် paid သင်တန်းများနှစ်ဦးစလုံးရှိပါတယ်။ သင်တစ်ဦးသင်တန်းစာရင်းသွင်းင့်ပြီးတာနဲ့သင်ကအကြောင်းအရာတစ်သက်တာအသုံးပြုခွင့်ရှိသည်လိမ့်မယ်။
ပညာရှင်များထံမှာသင်ယူ: 35,000 + ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားများ၌ဆုံးမဩဝါဒ 50 + ကျွမ်းကျင်သူသင်တန်းပို့ချခြင်းဖြင့်မှုတ်သွင်းယူကြနှင့်။
ဘယ်နေရာမှာမဆိုလေ့လာပါ: အော့ဖ်လိုင်းသင်ယူဖို့သင်တန်းများ download လုပ်ပါ။ သွားလာရင်းတွင်? အသံသာအနေအထားတွင်သင်တန်းများနားထောင်ပါ။
သင့်ကိုယ်ပိုင် PACE ကို AT လေ့လာရန်: ကျောင်းသားများနှင့်သင်တန်းပို့ချမေးခွန်းများကိုနှစ်ဦးစလုံးကိုမေးပါ။ မြန်နှုန်းထိန်းချုပ်မှုနှင့်စာတန်းထိုးနှင့်သင်၏သင်ယူမှုအတွေ့အကြုံကိုမိမိစိတ်ကြိုက်။
ရရှိနိုင်အခမဲ့နှင့် paid သင်တန်းများ:
- စီးပွားရေး: ဘဏ္ဍာရေး, ငွေကြေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှု, အများပြည်သူစကားပြော, တင်ပြချက်ကျွမ်းကျင်မှု, ရေးသားခြင်း, etc Plus အား, ဒေတာ & analytics (SQL, စက်သင်ယူမှု, နက်ရှိုင်းသောသင်ယူမှု, ဒေတာသိပ္ပံ & ပိုပြီး) ။
- အိုင်တီ & Software များ: အိုင်တီအောင်လက်မှတ်, ကွန်ယက် & လုံခြုံရေး, ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး, CCNA, etc
- ရုံး Productivity: Microsoft က, Apple, Google, SAP, Oracle က, etc
- ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ: စသည်တို့ကိုကုန်ထုတ်စွမ်းအား, ခေါင်းဆောင်မှု, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဏ္ဍာရေး, အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖွံ့ဖြိုးရေး, လေ့လာမှုကျွမ်းကျင်မှု,
- ဒီဇိုင်း: drawing, ကို web ဒီဇိုင်း, ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းဒီဇိုင်း tools များ (Photoshop ကို, Adobe Illustrator & ပိုပြီး), UX ကိုဒီဇိုင်း, UI ကိုဒီဇိုင်းပုံစံဒီဇိုင်းစဉ်းစားတွေးခေါ်, etc
- Marketing ကို: ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်စျေးကွက် (SEM), Search Engine Optimization (SEO ဆိုသည်မှာ), လူမှုမီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေး, စျေးကွက်အခြေခံ, မိုဘိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေး, content တွေကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေး, ထုတ်ကုန်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး, etc
- လူနေမှုပုံစံ: အနုပညာ & လက်မှုပညာ, ခရီးသွား, ဂိမ်း, ခွေးလေ့ကျင့်ရေး, etc
- ဓါတ်ပုံ: ဒစ်ဂျစ်တယ်ဓာတ်ပုံပညာ, ဓာတ်ပုံကိရိယာများ, စီးပွားဖြစ်ဓာတ်ပုံ, ဗီဒီယိုဒီဇိုင်း, etc
- ကျန်းမာရေး & Fitness: စသည်တို့ကိုယောဂ, အာဟာရ, ဘာဝနာ, Self-ကာကွယ်ရေး,
- ဆရာသင်တန်း: စသည်တို့ကိုအွန်လိုင်းသင်တန်းကိုဖန်ဆင်းခြင်း, တင်ပြချက်ကျွမ်းကျင်မှု, သင်ကြားပို့ချဒီဇိုင်း,
- ဂီတ: တူရိယာ (ဂစ်တာ, စန္ဒရား & ပိုပြီး), ဂီတအခြေခံ, ဂီတနည်းစနစ်, ဂီတဆော့ဖျဝဲ, etc
- ဘာသာစကားများ: အင်္ဂလိပ်, စပိန်, ပေါ်တူဂီ, တရုတ်, etc
Udemy - အွန်လိုင်းသင်တန်းများ
19.29 ကို MB
ပေါ် မူတည်. စီးပွားရေးသင်တန်းများ